यसरी बढाउनुहोस् काम्प्युटरको गती | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
यसरी बढाउनुहोस् काम्प्युटरको गती
Posted on मार्च 8, 2010 by yekloyatri
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले हाम्रो दैनिक जीवन सहज र दु्रत भएको छ । खासगरी कम्प्युटरको प्रयोग हाम्रा निम्ति वरदान नै सावित भएको छ, तर प्रविधिको यो उच्चतम माध्यम सुस्त गतिको भएर काम गर्न अप्ठेरो त भैरहेको छैन ? यदि त्यसो हो भने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । आफ्नै प्रयासले कम्प्युटरका यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
डिक्स इरर क्लिन
कुनै प्रोगाम क्रास वा पावर सर्टेज भए पीसी हार्ड डिक्समा इरर क्रिएट गर्न सकिन्छ । यसका लागि कम्प्युटरको हार्ड डिक्सको इरर चेक गर्नुपर्छ । डिक्स चेकिङका लागि माइ कम्प्युटरमा जानुहोस् । जुन डिक्स चेक गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र फेरि प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस् । प्रोपर्टिज डायलग बक्समा टुल ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् । इरर चेकिङ सेक्सनमा चेक नाउ बटन थिच्नुहोस् । कम्प्युटरमा इरर चेक गर्न चेक डिक्स एक्सेस गर्नुहोस् । इररअनुसार डिक्स चेकिङमा
करिब एक घण्टा लाग्न सक्छ । डिक्स चेक सातामा एकपटक गर्न सकिन्छ ।
टेम्पररी फाइल हटाउनुहोस्
जब वेब ब्राउज गरिन्छ तब कम्प्युटरको टेम्पररी फाइल्सले काम गरिरहेको हुन्छ । यसका साथै माइक्रोसफ्ट वर्ड एवं एक्सलमा काम गरेका बेला पनि टेम्पररी फाइल्सले काम गरिरहेको हुन्छ । यसले गर्दा कम्प्युटरको स्पिडमा फरक पर्छ । यसबाट बच्न विन्डोज डिक्स क्लिनअप स्त्रिmन प्रयोग गरेर पीसीको इन डेड फाइलबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ ।
डिक्स क्लिनअपका लागि माई कम्प्युटरमा गएर चेक डिक्समा राइट क्लिक गर्नुहोस् । प्रोपर्टिज डायलग बक्समा गएर डिक्स क्लिनअपमा क्लिक गर्नुहोस् । डिक्स क्लिनअपको प्रयोग अनावश्यक फायल हटाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्क्यानपछि डिक्स क्लिनअप डायलग बक्सबाट हटाइएका फायलको लिस्ट देखिन्छ ।
कम्प्युटरले खासगरी फाइल खोज्ने काममा बढी समय लगाइरहेको हुन्छ । यसका बाबजुद कम्प्युटर एक्सेस र रिटि्रबल स्पिड बढाउन फायल्सको कुनै भागमा छुट्याइन्छ, तर अपडेट गरेपछि कम्प्युटर इन फायल्सको कुनै भागमा हार्ड डिक्सले सेवा गर्न थाल्छ । यसले कम्प्युटरको स्पिड कम गरिदिन्छ, ’cause यसले हरेक फाइल अलग-अलग स्थानमा खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
यसलाई ठीक गर्न डिक्स डिप|mेग्मेन्टर प्रोग्राम आवश्यक हुन्छ जसले फाइललाई एकसाथ जोड्न सक्छ । यसका लागि पनि माई कम्प्युटरमा गएर चेक गर्ने फाइलमा राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टीमा क्लिक गर्नुपर्छ ।
प्रोपर्टी डायलग बक्समा टुल्स ट्याबमा क्लिक गरी डिप|mेग्मेन्टेसन सेक्सनमा गएर डिप|mेग्मेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् । डिक्स डिप|mेग्मेन्टेर डायलग बक्समा डिक्सको सेलेक्ट गरेर एनालाइसमा फेरि क्लिक गर्नुहोस् । पीसीको एनलाइसिस गरेपछि डिक्स डिप|mेग्मेन्टरमा एउटा सन्देश आउनेछ र त्यसले भन्नेछ- तपाईं आफ्नो कम्प्युटरलाई डिप|mेग्मेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न ? कम्प्युटर डिप|mेग्मेन्ट गरेपछि त्यो फायलको प्रोगाम र साइजअनुसार पुनः अर्गनाइज हुन्छ ।
एन्टी भाइरस इन्सटल गर्नुहोस्
भाइरस र स्पाइवेयर कम्प्युटरको सुस्त गतिका लागि जिम्मेवार हुन्छ । यसका साथै यसले डाटा र फाइललाई समेत प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । एन्टी भाइरस वा एन्टी स्पाइवेयरलाई समय-समयमा अपडेट गरिरहनुपर्छ । यसका लागि पेड प्रोगाम जस्तै नरटन एन्टी भाइरस र ट्रेन्ड माइक्रोका अतिरिक्त इन्टरनेटबाट समेत एन्टी भाइरस तथा एन्टी स्पाइवेयर डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
पेज हिस्ट्रीको काम गर्नुहोस् छ भने वेब ब्राउजिङका लागि इन्टरनेट एक्सप्लोरर मिलाउने माइक्रोसफ्टको प्रोगाम उपलब्ध छ । आफ्नो पीसीको स्पिड बढाउन वेब पेज हिस्ट्रीको काम गर्नुपर्छ । यसका लागि इन्टरनेट एक्सप्लोररमा जानुहोस् र फेरि टुल मेनुमा गएर इन्टरनेट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यसपछि हिस्ट्री सेक्सनमा गएर कति दिनको हिस्ट्री राख्न चाहनुहुन्छ टाइप गर्नुहोस् । कम्तीमा एक दिनको हिस्ट्री राख्नुहोस् ।
माइक्रोसफ्ट अपडेटका लागि अटोमोड
माइक्रोसफ्टले बजारमा यस्ता अपडेट ल्याइरहेको हुन्छ जसले कम्प्युटरको स्पिड बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछन् । यसका लागि माइक्रोसफ्ट अपडेटको अटोमोड गर्नुहोस्, जसले कम्प्युटरले स्वयं नयाँ अपडेट्सको डाउलोड एवं इन्स्टल गरोस् ।
« सम्पुर्ण नारीलाई शुभ कामना इङल्यान्डको लागि बनाएको पासपोर्टले कुबेतको मरुभुमिमा ल्याइपुर्यायो:-चर्चित गायिका रत्ना बराल »